Kutheni i-GDPR ilungile kwiNtengiso yeDijithali | Martech Zone
Kutheni i-GDPR ilungile kwiNtengiso yeDijithali
NgoLwesibini, Juni 26, 2018 NgoLwesibini, Juni 26, 2018 ULarry Harris
Igunya elibanzi lowiso-mthetho elibizwa ngokuba Umgaqo-jikelele woKhuselo loLwazi, okanye i-GDPR, yaqala ukusebenza ngoMeyi 25. Umhla obekiweyo unabadlali abaninzi beentengiso zedijithali abaxakekileyo kwaye abaninzi banexhala. I-GDPR iya kufuna irhafu kwaye iya kuzisa utshintsho, kodwa iyatshintsha abathengisi bedijithali kufuneka bamkele, bengoyiki. Nasi isizathu:
Ukuphela kweModeli yePixel / yeKhukhi ilungile kwiShishini
Inyani yile yokuba le nto kwakukudala ilindelwe. Iinkampani bezirhuqa iinyawo, kwaye ayothusi into yokuba i-EU ikhokele ngaphambili. Le yi ukuqala kwesiphelo semodeli ye-pixel / yecookie. Ixesha lokweba idatha kunye nokukhutshwa kwedatha liphelile. I-GDPR iya kukhuthaza intengiso eqhutywa yidatha ukuba ingene ngakumbi kwaye isekwe kwimvume, kwaye iya kunika amaqhinga asasazekayo njengokuphindisela ekumiselweni kwakhona kunye nokumakishwa kwakhona okungafunekiyo kunye nokungaqhelekanga. Olu tshintsho luza kuzisa ixesha elizayo lentengiso yedijithali: ukuthengisa okusekwe ebantwini, okanye okusebenzisa idatha yeqela lokuqala endaweni yedatha yomntu wesithathu / ukukhonza intengiso.
Ukuziqhelanisa neMizi-mveliso emibi kuya kulungiswa
Iinkampani ezixhomekeke kakhulu kwiimodeli zokuziphatha kunye nokujolisa ekujoliseni ziya kuchaphazeleka kakhulu. Oko akutsho ukuba ezi zinto ziya kunyamalala ngokupheleleyo, ngakumbi kuba zisemthethweni kumazwe amaninzi angaphandle kwe-EU, kodwa imeko yedijithali iya kuguquka ukuya kwidatha yeqela lokuqala kunye nentengiso yomxholo. Uya kuqala ukubona amanye amazwe ephumeza iiseti ezifanayo zemigaqo. Nkqu neenkampani ezisebenza kumazwe ezingezizo ezobuchwephesha eziwela phantsi kwe-GDPR ziya kubuqonda ubunyani bendawo yentengiso yehlabathi kwaye ziya kusabela kwicala umoya ovuthuzayo.
Ukucocwa kweDatha ekuDlulelwe lixesha
Oku kulungile kwintengiso kunye nentengiso ngokubanzi. I-GDPR sele ikhuthaze ezinye iinkampani e-UK ukuba zenze ukucocwa kwedatha, umzekelo, ukuhla uluhlu lwazo lwe-imeyile kangangesibini kwisithathu. Ezinye zeenkampani zibona ukuvulwa okuphezulu kunye nokucofa amaxabiso kuba idatha abanayo ngoku ingumgangatho ongcono. Oku kuyimbali, ngokuqinisekileyo, kodwa kusengqiqweni ukwenza ukuba ukuba idatha iqokelelwa njani ngaphezulu kwebhodi kwaye ukuba abathengi bangena ngokuzithandela nangokwazi, uza kubona amaxabiso aphezulu okuzibandakanya.
OTT imele i ngaphaya kwaphezulu, igama elisetyenziselwa ukuhanjiswa kwefilimu kunye nomxholo weTV nge-intanethi, ngaphandle kokufuna ukuba abasebenzisi babhalise kwikhebula lendabuko okanye inkonzo yeTV yokuhlawula i-satellite.
Ngenxa yobume bayo, i-OTT intle kakhulu kwi-GDPR. Ukuba awukhethanga ukungena, awujoliswanga, ngaphandle kokuba, umzekelo, ujolise kwimfama kwi-YouTube. Ngokubanzi, nangona kunjalo, i-OTT ilungele oku kuguqulwa komhlaba wedijithali.
Kunganzima okwethutyana, kodwa kuya kuba kuhle kubapapashi kwixesha elide, ngokungafaniyo noko siqala ukukubona neenkampani ezilawula ugcino lwazo lwe-imeyile. Oku kucocwa kwedatha kunyanzelisiweyo kunokuba yinto yokuqala, njengoko kuchaziwe apha ngasentla, kodwa iinkampani ezihambelana ne-GDPR zikwabona ababhalisile ababandakanyekayo.
Kwangokunjalo, abapapashi baya kubona abathengi ababandakanyekayo bomxholo wabo abaneenkqubo ezingqongqo zokungena endaweni. Inyani yile yokuba abapapashi babesweleka ngokusayinwa kunye nokungena ixesha elide. Uhlobo olukhethiweyo lwezikhokelo ze-GDPR zilungile kubapapashi, kuba bafuna idatha yeqela labo lokuqala ukuba nefuthe.
Inxaxheba / Ukuthatha inxaxheba
I-GDPR inyanzela umzi-mveliso ukuba ucinge nzulu malunga nendlela esondela ngayo kubume, esele ikhutshiwe ixesha elithile ngoku. Kuza kuba nzima kubasebenzisi bogaxekile, kwaye kuya kunyanzela umzi mveliso ukuba uhambise umxholo owenzelwe wena ngabathengi. Izikhokelo ezitsha zifuna ukuthatha inxaxheba kwabathengi. Oko kunokuba nzima ukufezekisa, kodwa iziphumo ziya kuba ngumgangatho ophezulu.
tags: ezithengisairhafuCookiecookiesiilensi zedathaukuthengiswa kwedathagdprOttngaphaya kwaphezulupixelyokulandelelaIipikseli zokulandela umkhondo
U-Larry Harris yi-CEO ye-Sightly, iqonga lentengiso yevidiyo elisebenzisa abantu abajolise ekujoliseni ababukeli nezona ntengiso zevidiyo zibaluleke kakhulu.
Ukuqinisekisa: Izixhobo zokunyaniseka kweDatha kuLawulo lwakho lweCRM
Friendbuy: IiNkqubo zokuThumela, ukuKhangela ukuKhangela, kunye nokuPhunyezwa kwePhulo lokuKhokelela